Zvemukati Zvekushambadzira marongero ako Ekutanga brand - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
content management, Digital Marketing, Marketing automation, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Zvemukati Zvekushambadzira marongero ako Ekutanga echiratidzo
Iwe uri muzvinabhizimusi anoshuvira uye uwane akanakisa bhizimisi pfungwa? Dambudziko rekutanga rako bhizimisi ndechokuti kune kutya kwakawanda. Haisi dhiri iri nyore kudzivirira zano rako kuti risakundike. Kana iwe uri kugadzira yako yekutanga-up, iwe unenge uine zvinhu zvakawanda zvekufunga uye mibvunzo yakawanda yekuzvibvunza iwe. Somuenzaniso, unofanira kutanga iye zvino here kana kuti zviri nani kumirira imwe nguva yakakodzera? Nzira yekuwana sei kuenzanisa pakati pekuongorora nyika ye bhizimisi uye zvehupfumi uye kushanda pane yako yakasarudzika pfungwa? Chimwe chezvinonyanya kukosha ndechekushambadzira startups. Iwe uchave nemakwikwi akawanda zvisinei kuti uri mune indasitiri ipi uye iwe unofanirwa kumira kunze kwechaunga. Tine zvimwe zvinoshamisa content marketing matipi ayo anogona kukubatsira iwe kubudirira uye kuvaka yakasarudzika mhando chiziviso.
Shandisa Social Media kusimudzira
Kana iwe uri munzira yako yekutanga yako pfungwa, iwe uchafanirwa kushanda pamwe evanhu vezvenhau. Zvakanaka, iyi inzira huru yekuparadzira ruzivo nezve yako yekutanga-up. Iwe unogona kugovera zvinongedzo kushamwari uye mhuri, pamwe nekuita kuti vaparadzire izwi online. Chinhu icho munhu wese anoda muzvinabhizimusi anofanira kufunga nezve kuwana shamwari dzine pfungwa dzakafanana. Chekutanga, vamwe vacho vanogona kuve vanogona kuve cofounders kana vatengi. Chechipiri, kana uine shamwari dzakawanda, zviri nyore kuita kuti chirongwa chako chirarame uye kuti mhando yako izivikanwe. Unogona kutanga peji nyowani yako bhizimisi uye iyi inzira yakanaka yekugovera zvinyorwa zvitsva zvebhurogi, kukwidziridzwa uye zvigadzirwa. Ita shuwa kuti unoshandisa akati wandei evanhu vezvenhau Mapuratifomu kuparadzira ruzivo kune vateereri vako. Asi unofanira kuyeuka kuti mumwe nomumwe Mapuratifomu inoda yakakosha yemukati optimization.
Gadzira zvemukati pane zvinofambisa nyaya
Paunotanga kunze, kugadzira zvemukati zvinogona kuoma. Unotangira kupi? Heano mamwe matipi kubva kune nyanzvi dzinoshanda pane kambani yekunyora rondedzero. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kutanga nekuita imwe tsvagiridzo pane dzimwe nyaya dziri kuitika muindasitiri yako. Izvi zvinokupa iwe pfungwa yeizvo vateereri vako vanoda kuverenga. Gara uchifambirana nemaitiro azvino. Ingoita shuwa kuti haukope chero zvemukati zvaunoona pa Indaneti. Uku kunenge kuri plagiarism. Asi iwe unogona kunyora pamusoro pemafungiro ako pamisoro. Kana iwe ukawana izvi zvakaoma, unogona kugara uchisarudza a Website iyo inonyora mapepa ekuti iwe ubatsire kugadzira zvinonakidza uye zvinonakidza zvemukati. Vanokupa zvinyorwa zvebhurogi rako izvo zvinochengeta vateereri vako vakatarisa uye kugutsikana. Rega nyanzvi dziuye nezvinonakidza uye zvinonakidza zvemukati kuti utore nguva uchiongorora zvinofarirwa nevateereri vako.
Funga nezvevaeni zvinyorwa
Kana wava mutsva bhizimisi, chimwe chezvinhu zvakaoma kuburitsa shoko. Kutumira vaenzi kunogona kuva nzira huru yekuita izvi. Unogona kuendesa tsamba yevaenzi kune hombe Website iyo yatova nevateereri. Nenzira iyi, iwe unogona kuita kuti zvemukati zviverengerwe uye ivo vanogona kuuya kune yako Website. Bata vane chiremera chepamusoro Websites kuona kuti vachabatsira here. Zvemukati zvako zvichange zvine akawanda backlinks kuitira kuti online traffic iuye nenzira yako. Kunze kwezvo, inzira yakanaka kwazvo yekuita kuti brand yako izivikanwe. Rangarira kuti kutanga kwako kune mukana wekubudirira asi zvinotora nguva kuti usvike ikoko.
Iva anoenderana uye gadzira purogiramu
Iwe haugone kuisa mashoma akareruka zvinyorwa uye zvirimo pane yako Website uye kutarisira kukura vateereri husiku. Iwe unofanirwa kuenderana munzira yako kuti uwane yakawanda traffic. Izvi zvinoreva zvinyorwa zvenguva dzose vhiki imwe neimwe. Kutanga, izvi zvinofanirwa kunge zvakatenderedza maviri kusvika matatu zvidimbu zvitsva zveyakasarudzika zvemhando yepamusoro kune vateereri vako. Kana uchinge wanyatsosimbiswa, unogona kutumira kutenderedza kamwe pasvondo. Sezvo iwe uchangotanga iwe unenge wakabatikana neakawanda mabasa, ronga mberi saka iwe unogona kuseta nguva parutivi kuti ugadzire zvemukati uye kusimudzira brand yako. Ipapo iwe unogona kuzvironga online kuti iiswe kune yako Website. Kuve pamberi pemutambo ipfungwa yakanaka. Websites izvo zvinonyora zvinyorwa zvako zvinogona kukubatsira kuti urambe wakafanana, ramba uchikura vateereri vako uye nekuvandudza chitupa chako.
Rangarira mavhidhiyo uye mifananidzo
Kana zvasvika pakuona zvemukati, vanhu vanogona kuita husimbe. Zvatinoreva ndezvekuti ivo dzimwe nguva vanosarudza kutarisa chimwe chinhu pane kuita nhamburiko yekuchiverenga. Saka, ita shuwa yekuisa mifananidzo uye ekushambadzira mavhidhiyo munzira yako yekutengesa. Kufunga nezve maitiro azvino uno, zvemukati zvekuona inogona kuve nzira huru yekubata kutarisisa kwevanhu vese pavanenge vachipururudza evanhu vezvenhau. Zvinogona kutoenda nehutachiona kana iwe ukatora nguva yekugadzirisa kushambadzira kwako. Pakutanga chaipo, bhajeti rako rinogona kunge riine mashoma. Saka, haifanirwe kunge iri hombe kugadzirwa. Chimwe chinhu chiri kubatika uye vateereri vako vanogona kuenderana nacho. Tsvaga vateereri vako zvakanyanya sezvaunogona, kuti iwe ugone kuwana pfungwa yezvazvino zvinodiwa.
Goverana yako yakasarudzika
Vatengi havana hanya zvakanyanya nemitengo kupfuura zvavaive makore mashoma apfuura. Ivo havachatarise izvo zvakachipa zvigadzirwa pamusika. Pane kudaro, ivo vanoda kusarudza mhando yavanotenda mairi. Zvakakosha kuti uwane meseji yako kunze uko uye kuratidza kuti nei yako yekutanga-yakasarudzika mumusika. Chii chinoita kuti ubude pachena? Ndeapi mabhenefiti aunogona kupa ako vatengi? Iyi ndiyo mibvunzo yavanoda kuziva mhinduro kwadzo. Kugadzirwa kwehutano Zvekutangisa zvakasarudzika nekuti iwe hauna vateereri vakasimbiswa zvakadaro. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kushanda nesimba kuti utore vatengi vatsva kubva kune vako vakwikwidzi. Vaudze zvaunogona kuita zvirinani uye nei vachifanira kufunga kuchinjira kwauri munguva inotevera. Tsvagisisa makwikwi ako uye uone kuti yako niche chii. Panogara paine chimwe chinhu chaunoita zvirinani.